चीनको सरकारी मिडियाको दावीः संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हाम्रो हो - Janaki Post
चीनको सरकारी मिडियाको दावीः संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हाम्रो हो
जानकी पोस्ट २८ वैशाख, काठमाडौं । चीनको सरकारी मिडीयाले (Sagarmatha) सगरमाथा चीनको भुमिमा रहेका दावी गरेका छन् । नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा स्थित रहेको संसारको सबैभन्दा (World Biggest Peak) अग्लो चुचुरो हो सगरमाथा । जसलाई चीनको सरकारी मिडीयाले आफ्नो भएको बताएको हो ।
२ मे मा (CGTN) चीनको राष्ट्रिय टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कले आधिकारिक ट्वीटर पेजमा चोमोलोङमाको चुचुरो माथि देखिएको विशेष किसिमको सुर्यको दृश्य भनी तस्बिर राखेको छ । जसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेष्ट (MT. Everest) चीनमा पर्छ भनिएको छ ।
सगरमाथाको (Sagarmatha) चुचुरो नेपालमा पर्छ र यसलाई विश्वले पनि स्वीकार्दै आएको छ । तर, चीनले पछिल्लो समय विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई कोमोलोङमा भन्दै आफ्नो देशमा पर्ने प्रचार गर्न थालेको छ । चीनले सगरमाथाको उचाई आफ्नो तर्फबाट नाप्न थालेको छ ।
सगरमाथा भन्ने वित्तिकै विश्वभर नेपाल भनेर चिनाइरहनु पर्दैन । नेपाल र सगरमाथा पर्यायबाची शब्द बने जस्तै छ । यस्तो अवस्था चीनको सरकारी मिडीयाले आफ्नो भएको भन्नु गलत भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
CGTN latest news
chinese media news about MT Everest
World Biggest Mountain
Previous articleभारतीय अतिक्रमणविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ
Next articleनेपाल सरकारसँग भारतीय पक्षलाई स्पष्टिकरण सोध्ने हैसियत छैन ? : मेयर बरबरिया